Intee in le'eg Awoodda Hadalkayga Stereo Ma U Baahan Yahay?
Tiyaatarka Aqalka Aasaaska
Jaantuska Qadarka Lacagta ee Awooda ee Nidaamkaaga
Mid ka mid ah mowduucyada ugu jahwareerka leh ee maqalka ayaa ku ogaanaya waxa kor u qaadaya cabbiraadda qiyaasahaaga ku hadlaya. Caadi ahaan, dadku waxay sameeyaan go'aankaas oo ku saleysan hab fudud oo mararka qaarkood aan micno lahayn oo ku hadla afkooda iyo qiyaasaha wax soo saarka . Qaar badan waxay u hoggaansamaan khaldan khaldan ee ku saabsan sida ay u shaqeeyaan amaba kuwa hadlaya. Waxaan kufaragnay sannado tijaabo ah iyo qiyaastii qiyaasaha sheekooyinka - oo aan ku helnay aragtiyo muuqaal ah oo ka hadlaya kumanaan injineer ah iyo suuqgeyn suuqgeyn ah oo ku jira ganacsiga maqalka - sidaa daraadeed halkan waa waxa aad dhab ahaantii ogtahay!
Xaqiiqda Ku Saabsan Kalfadhiyeyaasha Awoodaha Awoodda
Marka hore, waxaa muhiim ah in la fahmo in maaraynta awoodda hadalka ee taabashada ay inta badan aan macno lahayn. Caadi ahaan, waxaad aragtaa "awoodda ugu sareysa" liiska iyada oo aan wax faahfaahin ah laga bixinin sida loola macaamilay. Miyuu yahay heerka ugu sareeya ee joogtada ah? Heer caadi ah? Heerka qabow? Muddo intee le'eg ayuu ku jiraa, iyo nooca sheyga? Kuwani sidoo kale waa su'aalo muhiim ah.
Nasiib darro, waxaa jiray heerar badan oo isku dhafan oo lagu cabirayo xoojinta awoodda hadalka ku hadlaya, oo ay daabacday Ururka Iskaashiga Dhismayaasha (AES), Ururka Industri Industries (EIA) iyo Guddiga Caalamiga ah ee Farsamada Electrotechnical (IEC). Waa wax la yaab leh sababta qofka caadiga ah uu ugu yaraan u wareeri karo.
Intaa waxaa dheer, badi shirkadaha aan la hadalnay dhab ahaan ma raacin heerarkaas; waxay si fudud u sameeyaan qiyaasta waxbarasho. Badanaa, go'aankan wuxuu ku saleysan yahay awooda wax qabadka ee subwoofer. (Xeeladaha ku shaqeynta korontada ku shaqeeya darawaliinta khatarta ah, sida woofers iyo tweeters, waxay yihiin kuwo aad u heer sareeya oo macne leh marka loo eego siyaabaha loogu hadlo kuwa dhamaystiran.) Mararka qaarkood xajinta awoodda hadalka ee kumbuyuutarku waxay ku salaysan tahay suuqgeynta. Waxaad xitaa arki kartaa soo saaraha waxeey qadariyaan qandaraaslaha qaaliga ah ee kor u qaadida awoodda kor u qaadida qiimaha sarreeya ee qiimaha hooseeya, inkastoo labaduba isticmaalaan woofer isku mid ah.
Awoodaha Mugga iyo Awooda Awoodaha
Waxaa muhiim ah in la fahmo in xaaladaha badankooda, amp oo ah 200-watt si toos ah awood u leh sida 10-watt amp. Tani waa sababta oo ah dhageysiga badankoodu wuxuu ku dhacaa heerarka celceliska, halkii ay ka yar tahay 1 watt waa awooda ku filan dadka hadlaya . Ku dhaji khabiir ku xeeldheer qaybta mugga, dhammaan qalabixiyeyaashu waxay siiyaan awood isku mid ah - hadba inta ay awoodaan inay keenaan awoodda badan.
Sidaas darteed waa runtii qiyaasta mugga ee muhiimka ah, maaha awooda kor u qaadista. Haddii aadan waligaa ku qanacin nidaamkaaga mugga mugdigu aanu raaxo lahayn, amp waa inaysan marnaba soo saarin wax ka badan 10 ama 20 watts. Sidaa awgeed, waxaad si ammaan ah ugu xirmi kartaa 1,000-watt amplifier-ga oo ah 2-taako oo yar. Kaliya ha u leexin mugga ilaa inta uu hadalku kari karo.
Waxyaabaha aanad sameynin waa fiilo xoog leh oo awood yar leh - waxaad dhahdaa, 10 ama 20-watt oo model ah - adigoo ku hadlaya sheekada caadiga ah oo kor u qaad mugga korkiisa. Qalabka yar-yar ee awoodda ku shaqeeya ayaa laga yaabaa inuu xoqo (qalooc), iyo xarriiqa amplifier waa sababta ugu badan ee keenta guuldarada hadalka. Marka qiyaasahaaga wax lagu xoqayo, waxaa dhab ahaantii ka soo baxaaya heerka-sare ee DC-ga tooska ah ee hadalka. Tani waxay ku gubi kartaa codadka darawaliinta 'heights' oo ku dhawaad ​​isla markiiba!
Sidee loo xisaabiyaa Cabbirka Amp Waxaad u Baahantahay
Adoo isku dayaya in ay waxyaalahan oo dhan u muuqdaan, way fududahay in la xisaabiyo nooca amp ee aad u baahan tahay. Qaybta ugu wanaagsani waa in aad sidan ku sameyn kartid madaxaaga. Ma noqon doonto mid aad u fiican, sababtoo ah waxaad ku tiirsanaanaysaa tusaalooyinka ka hadlaya afhayeenka iyo ambalaansayaasha, kuwaas oo inta badan aan la fahmin mararka qaarkoodna la buunbuunin. Laakiin waxay kugu soo dhaweyneysaa kugu filan. Halkan waa sida loo sameeyo:
Qaado heerka xasaasiga ah ee afhayeenka , kaas oo lagu sharaxayo qashin-qubka (dB) ee 1 watt / 1 mitir. Haddii ay ku qoran tahay qolka dhexdiisa ama qolka yar, waxaad isticmaashaa lambarkan. Haddii ay tahay naadi anechoic ah (sida kuwa laga helay qaar ka mid ah cabbirada hadalka ku hadla) ku dar +3 dB. Tirada aad hadda haysatid waxay kuu sheegi doontaa sida qeylaha uu ugu hadlayo kursigaaga dhageysiga leh calaamadda 1-watt.
Waxa aan dooneyno inaan helno waa qadarka awoodda loo baahan yahay inuu ku dhufto ugu yaraan 102 dB, taas oo ku saabsan sida ugu badan ee dadku marwalba rabaan inay ku raaxaystaan. Waa sidee qaylada? Miyey weligeed ku jirtay masraxa filimada oo aad u weyn? Qalabka saxda ah ee qallafsan ee ku socda heerka tixraaca wuxuu ku siin doonaa qiyaastii 105 dB per channel. Taasi waa mid aad u qosol badan - marka loo eego dadka intooda badan waxay doonayaan in ay dhagaystaan ​​- taas oo ah sababta ay tiyaatadu marar dhif ah u ciyaaraan filimaadyo heer sare ah. Sidaa daraadeed 102 dB waxay bartilmaameed fiican u tahay.
Halkan waa xaqiiqda muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad ogaato; si aad u hesho qiyaasta dheeraadka ah ee 1.3 dB, waxaad u baahan tahay inaad labalaabiso awoodda amp. Sidaa darteed haddii aad leedahay afhayeenka dareenka qolalka qolalka 88 dB ee 1 watt, ka dib 2 watts wuxuu kuu heli doonaa 91 dB, 4 watts wuxuu kuu heli doonaa 94 dB, iyo wixii la mid ah. Kaliya tiri: 8 watts waxaad heleysaa 97 dB, 16 watts ayaa kuugu soo gaara 100 dB, 32 watts ayaa kuugu soo gaara 103 dB.
Sidaa darteed waxaad u baahan tahay waa amplifier awood u leh inay keenaan 32 watts. Dabcan, cidina ma samayso 32-watt amp, laakiin 40 ama 50-watt alert ama amfiiyu waa inay sameeyaan ganaax. Haddii amp ama alaab-qeybiyaha aad rabto in la saaro, waxaad tidhaahdaan, 100 watts, ha ka welwelin. Xusuusnow, heerka celceliska dhagaysiga leh kuwa ku hadla afka caadiga ah, amp wax waliba wuxuu soo saaraa qiyaastii 1 watt, si kastaba.
Isbarbardhiga Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa Dhaqdhaqaaqa iyo Noocyada Wareegtada Noocyada Koobi
Farqiga u dhexeeya S-VHS iyo S-Video
Maxay Noocyada Nooca Bannaanka ee DVD ah Ma u Baahanahay Isticmaalka Diiwaanka DVD?
Noocyada Diiwaanka Dijital Dijital ah (DVR)
Sidee iyo Markaad Ku Bixinayso Fariin adag oo ku Saabsan Nidaamka Stereo
Sida Loo Xiri Laheysto DTV Converter Box to Analog TV
Jawaabaha Su'aalaha Aasaasiga ku saabsan Diiwaanka DVD-ga
Dolby TrueHD - Maxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Maxay yihiin PS / 2 Ports and Connectors?
Herc's Adventure Cheats ee PS1
Maxay Foom Fadhiyaan ATF?
Elgato EyeTV 250 Plus ee Mac
Sida loo Isticmaalo Qoraallada Lagu Qorayo Dukumiintigaaga
Sidee inaad u soo xasuusato macaamiishaada Hotmail ee Hotmail
Sida loo abuuro cinwaanka Alias ​​Email Address ee Outlook.com
Hagista Maaraynta Xakamaynta Internetka (Protocol) (ICMP)
Ermahgerd! Taas Taas Taas
Qaab dhismeedka Horudhaw ee GIMP
4 Siyaabaha Si aad u ogaatid Ubuntu Linux Kumbuyuutarkaaga ku ordi doono
Iskuday Qodobka Kooxaha Racing Cheats ee PlayStation 2
Ku dar muusikada PowerPoint 2007 Soo Bandhigyada
Suuq-geynta sawirrada ee boggaaga Podcast
Sida Loo Bixiyo ama Loo Hesho Macluumaadkaaga Muuqaalka
Isticmaal Macluumaadka Cusub ee Cusboonaysiinta OS Xilka si loo saxo Dhibaatooyinka Ku-rakibidda
Halkee ayaan ku soo dejin karaa Windows 98?
Sida loo sii wado qorshe ah Muuqaalka Muuqaalka ee Webka
Sida loo qaabeeyo iPod